अहिलेसम्म कहाँ-कहाँ देखिएकाे छ काठमाडाैंमा हैजा ? कसरी सतर्कता अपनाउने? – Health Post Nepal
२०७९ असार ८ गते १६:०५
काठमाडाैं-काठमाडौँका विभिन्न स्थानका चार जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। ती चारै जनाको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अहिले उपचार भइरहेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख वसन्त अधिकारीले अहिलेसम्म चारजनामा हैजा भएको पुष्टि जानकारी दिए।
उनका अनुसार बागबजारमा दुई, भोटेबहाल र डिल्लीबजारमा एक-एक जनामा हैजा देखिएको छ। उनले भने ‘फोहोर र प्रदूषित पानीका कारणले हैजा देखिएको हुनसक्छ । काठमाडौँ हैजाको जोखिममा रहेको देखियो।’
विगतमा काठमाडौँमा लामो समयसम्म फोहोर नउठेका कारण पनि हैजाको प्रकोप बढेको हुन सक्ने बताइएको छ। उनले हैजा पुष्टि भएका ठाउँमा थप खोजी र लक्षण भएका हैजाका विरामी खोजिरहेको बताए। बागबजारका दुई जना १८ र २३ वर्षीया युवतीमा यही असार ५ गते र भोटेवहाल र डिल्लीबजारमा एक-एकमा मंगलबार देखिएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले हैजा देखिएका ती व्यक्तिमा के कारणले हैजा भएको भन्ने पत्ता लगाउनका लागि जनस्वास्थ्य अधिकृत रामकृष्ण फुयालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण फोकल पर्सन समेत रहकेा फुयालले फोहोरको प्रकोप बढेर खानेपानीका प्रदुषण भएर हैजा रोग देखिएको बताए। उनले बागबजारको पानीको तीन वटा नमुना संकलन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार एउटा धारा, हैजा भएका व्यक्तिले प्रयोग गरेको जार र ट्युबबेलको पानीको नमुना परीक्षण गरिएको छ। उनले पानीका कारणले हैजा भएको आफूले शंका गरे पनि परीक्षणको रिर्पोट नआएकन केही भन्न नसकिने बताए। ‘हैजा देखिएको ठाउँमा गएर हैजा देखिएका व्यक्तिले के के खाएका हुन् भनेर हामीले परीक्षण गर्ने काम गरिरहेका छौं,’ स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले भने, ‘ हामीले घरवरपरका छिमेकीसँग पनि के कस्ता खानेपानी र खानेकुरा खाएका छन भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं।’
उनले बागबजारका दुई जना युवतीले जार र धाराको पानी नउमालिकन खाने गरेको पाइएको बताए। असार २ गते चटपटे खाएपछि ती युवतीलाई बान्ता गर्नुका साथै पखाला लागको थियो।
प्रमुख अधिकारीले ती युवतीले काम गर्ने ठाउँ डिल्लीबजार गएर खानेपानी र खानेकुराको परीक्षण भइरहेको बताए। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले चार जनामा हैजा देखिएपछि सतर्क अपनाउन आग्रह गरेको छ । कार्यालयले शुद्ध खानेपानी खान, प्रदुषित खानेकुरा तथा झिंगा धन्केको खानेकुरा नखान आग्रह गर्दै माइकिङ समेत शुरु गरेको उनले जानकारी दिए।
यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाले पनि खानेपानीलाई शुद्धिकरण गरेर मात्र खान आग्रह गर्दै टोलटोलमा खटाइएको उनले बताए। कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिडेट, खानेपानी वोक्ने ट्यांकर व्यवसायी र जार व्यवसायीसँग पनि खानेपानी शुद्धिकरण गरेर मात्र वितरण गर्न भनेको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हैजासम्बन्धी कुनै पनि लक्षण देखिएमा नजिकैको स्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ। गर्मी र बर्खायाममा विशेषगरी झाडापखाला, हैजा तथा पानीजन्य रोगहरु फैलिने हुँदा सबैलाई सजक र सतर्क हुन अनुरोध मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले पानीलाई उमालेर वा क्लोरिन प्रयोग गरेर मात्र प्रयोग गर्न, व्यक्तिगत सरसफाइ, खानेकुराको सरसफाइ तथा खुला रुपमा दिसापिसाब नगर्न र चर्पीको प्रयोग गर्न र दिसापिसाब गरेपछि अनिवार्य रुपमा साबुन पानीले हात धुन अनुरोध गरेकाे छ।